China Round gorofa gasket Kugadzira uye Fekitori | Jujie
denderedzwa sandara gasket
my – 45
nhema, chena, tsvuku, girini, nezvimwe
standard uye isiri-standard
-40 ° C -200 ° C (zvakajairika)
madhoo nemaWindows, michina, zvimwe
silicone yekuisa chisimbiso chinhu
Zvigadzirwa zvechigadzirwa: 1. Yakanaka pamusoro gloss.
2. Kwakanaka kutsiga.
4. Insulation, yakanyanya tembiricha.
5. Tekinoroji yakura, yakagadzikana mhando.
6. Inogona kuve yakagadzirirwa isina-mwero zvikamu.
7. Saizi chaiyo.
Edza Chinhu Chikwata Kunaya nzira silica gel
Kuoma Mahombekombe A 70 50
Tensile Simba Mpa 7.6 7.6
Kubvarura Simba KN / M 22.7 21.6
Nhanganyaya ye silicone yekuisa chisimbiso chinhu
100% Silicone Raw Zvinyorwa
Mahombekombe Durometer A KubvongodzaA-80shoreA
Dhayamita Kukura Chinzvimbo Inogona customized
-60 ° C -280 ° C (yakakosha)
Wall Ukobvu chubhu iri kunyange
kumeso, isina kutsemuka,
hapana mweya bubble, hapana kusachena,
isina munhuwi uye isina chepfu.
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co, Ltd, yakavambwa muna 2007, ikambani ine hunyanzvi iri kushandisa gadzira uye kuvandudza silicone zvigadzirwa. Isu tinonyanya kugadzira mhando yepamusoro yesilicone hoses, silicone yekuisa micheka uye zvisimbiso zvemagetsi, zvemagetsi, magetsi, mishonga, chikafu, kemikari, mota, kuvaka ngarava, uye maindasitiri emuchina.
Heano zvigadzirwa zvekambani yedu zvakasiyana, senge silicone gasket, fiberglass yakarukwa hosipaipi, silicone tambo, silicone chubhu, ine foam foam silicone rabha,kuzvishongedza
silicone tepi, nezvimwewo,
Unogona kudzvanya pamifananidzo pazasi kuti udzidze zvimwe.
Silicone o-mhete uye silicone gasket
Pashure: Industrial -Grade EPDM Silicone Foam Sheet / Chikafu cheGiredhi Silicone hosi silicone kupisa shrink chubhu
Zvadaro: silicone rabha chisimbiso pad cap
silicone chisimbiso o-mhete
nyanzvi diki yakatambanudzwa silicone gasket
silicone chisimbiso mhete yezuva mvura hita
kumanikidza cooker silicone yekubatanidza mhete
otomatiki zvikamu silicone o mhete yekugadzira michina yekuisa chisimbiso
Inopindirana silicone bhendi hita pamwe waya sealin ...